Nhau - Rising Star Yekushongedza Kumba ——- Mukati meWPC Masenduru ePaneru
Inokwira Nyeredzi Yekushongedza Kumba -—- Mukati meWPC Masvingo Mapaneru
Wood-epurasitiki yakagadzirwa (WPC) emadziro emadziro inodikanwa kwazvo nevatengi nekuda kwekuita kwayo kwepamusoro, kuramba kutsemuka uye deformation, nezvimwe.
Chii WPC Wall Mapaneru?
Wood-mapurasitiki emadziro emadzirohazvisi nyore kuumbika, hunyoro-chiratidzo, zvipembenene-humbowo, nyore kuchenesa, uye uine zvimwe zvekuchengetedza nharaunda zvivakwa. Akanaka uye ane rupo, akasiyana mavara, uye akasiyana siyana ekushandisa. Panzvimbo peye anti-ngura huni zvinhu, zvinonyanya kushandiswa kumatatu-ehunyanzvi madziro mhedzisiro uye yemukati kumashure madziro kushongedza.
Dege inotarisa kuvandudzwa uye kugadzirwa kwePVC furo huni mapurasitiki, kunova kutsvagisa nekusimudzira uye kugadzirwa kwezvakatipoteredza huni zvigadzirwa zvepurasitiki zvekushongedza kwemukati.
Zvakanakira WPC rusvingo ukomba:
1. kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza:WPC madziro emadziro ndeimwe nyowani mhando yezvakatipoteredza kuchengetedza zvinhu. Iyo yepamusoro haina kupendwa nependi, asi yakagadzirwa nematanda nepurasitiki, iyo inoderedza zvirimo zvezvinhu zvinokuvadza senge formaldehyde, uye yakachengeteka uye inochengetedza zvakatipoteredza.
2. Kurasikirwa kwacho kwakadzikira. iyo wpc madziro emadziro ane mhango mukati, saka zvimwe zvinhu zvinogona kuchengetwa, uye mutengo unodhura.
3.Hupenyu hwakareba hwebasa: Inofananidzwa neyakajairika huni, hupenyu hwebasa hweWPC madziro emadziro anogona kunge akareba semakore gumi kusvika gumi nemashanu, ayo anoponesa zvakanyanya mutengo uye nguva yekutsiva fenicha.
4. Kugona kugona:Iyo WPC madziro emadziro ane yakasimba kugona. Haisi chete isingabatwe nemishonga, inokwanisa kuchengetedza rusvingo rwekuvaka, asi zvakare ine yakanaka-yakatarisa uye yakatetepa pfungwa, ine yakanaka tembiricha yenguva dzose, kudzikisira ruzha, uye kudzivirira radiation. , Inogona zvakare kugadzirisa mhepo, kupfeka kuramba uye kukanganisa kusagadzikana uye mamwe mabasa.
5.Kushongedza kwakanaka:WPC madziro emadziro anogona kushandisa akasiyana mashandiro enzvimbo kushongedza akasiyana masitaera uye manakiro, uye anogona kuwiriranisa uye kubatanidza hwakazara dhizaini, inova yakanaka kuratidzwa yakasarudzika dhizaini uye kuravira kwemukamuri. Naizvozvo, yakazara wall wall ine yakanaka yekushongedza maitiro.